Allgedo.com » 2013 » January » 04
Home » Archive Daily January 4th, 2013
Qarax qasaaro gaystay oo caawa ka dhacay Xerada Dhagaxley ee dalka Kenya
Wararka ka imaanaya xerada Dhagaxley ee dalka Kenya ayaa sheegaya in qarax xooggan uu halkaas goordhow oo caawa ah uu ka dhacay. Qaraxan ayaa lasoo sheegayaa inuu ahaa Bambo Nooca gacanta laga tuuro ah taas oo lala eegtay goob maqaayad ah oo Dhagaxley kutaal, Waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Labo Ruux ayaa geeriyootay ilaa 6 kalana dhaawac ayaa soo gaaray sida uu soo sheegayo mid kamid ah Dadka...
Dagaal xoogan ayaa duleedka Magaalada Boosaaso ku dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Dagaalkaas ayaa waxaa uu gaystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana war kasoo saaray maamul goboleedka Puntland. Akhri Bayaanka kasoo baxay Maamulka Puntland ee dagaalkii dhacay Ciidamada Dowladda Puntland ayaa iska caabiyey weerar ay soo qaadeen kooxda...
SAWIRO: Kulan looga hadlay Xaalada Islii oo Nairobi ka dhacay
Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa waxaa kulan balaaran ku yeeshay Ganacsatada Xaafada Islii iyo Wasiirka Gaashaandhiga oo ay la socen labo Xildhibaan. Gudiga Gancsatada Islii oo uu hogaaminayay Sh Shakuul ayaa waxaa ay ugudbiyen Wasiirka cabasho ku aadan howlgallo ka dhan ah Soomaalida Xaafada Islii ee magaalada Nairobi. Waxaa ay Gudiga sheegeen in dowlada looga baahan yahay in ay cadayso...
Shir Jara’id oo uu galabta ku qabtay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya xafiiskiisa Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “ Saacid” ayaa wuxuu faafaahin ka bixiyey la haystayaal u kala dhashay wadamada Siiriya iyo Sirilaanka oo mudo ka badan labo sano afduub ay u haysteen Burcad badeed Soomaali ah. Dadaal dheer oo ay iska kaashadeen Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane...